सुलेमानीलाई अमेरिकाले कसरी निशाना बनायो ? – Online Annapurna
सुलेमानीलाई अमेरिकाले कसरी निशाना बनायो ?
२२ पुष २०७६, मंगलवार ०४:४७ January 7, 2020 97 Views
एजेन्सी/पुस २२-इरानका ‘कुड्स फोर्स’ प्रमुख कासिम सुलेमानीको हत्या गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रत्यक्ष आदेश दिएको खुलेको छ। अमेरिकाले ३ जनवरीमा इराकको राजधानी बग्दादस्थित विमानस्थलमा ड्रोनबाट हवाई हमला गर्दै इरानका सैनिक जनरल सुलेमानीको हत्या गरेको थियो। मिडियाहरुलाई खुफिया सुत्रहरुले दिएको जानकारीअनुसार सुलेमानीलाई सिध्याउन अमेरिकाले पूरा तयारी नै गरेको थियो।
केही समयअघि मात्रै इराक प्रवेश गरेका सुलेमानी दुई गाडीको बीचबाट अघि बढिरहेका थिए। उनी सवार गाडीमा इराकी सैनिकहरु पनि रहेको बताइएको छ। सरकारी सुत्रहरुका अनुसार ड्रोनबाट सुलेमानी सवार गाडीमा दुईवटा मिसाइल हानिएको थियो। विमानस्थलको कार्गो भवननजिकै सो हमला भएको थियो। हमलापछि इराकस्थित कुनै अमेरिकी सैन्य वेसलाई जानकारी गराइएको थियो। सार्वजनिक भएको एउटा तस्वीरमा रगत लत्पतिएको सुलेमानीको हात देखिएको थियो। औंलामा उनले आफूलाई मन पर्ने रातो औंठी लगाएका थिए।
हमलामा प्रयोग गरिएको ‘आर नाइन एक्स’लाई ‘निन्जा’ पनि भनिन्छ। लडाकु जहाज र हेलिकोप्टरबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने हावाबाट जमिनमा मार हान्‍न सक्ने यो मिसाइल युद्धटयांक ध्वस्त पार्न प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकी मिडियाहरुका अनुसार सुलेमानीमाथि मानवरहित एअरक्राफ्ट एमक्यू–९ रिपरबाट क्षेप्यास्त्र हमला गरिएको थियो।
यो यस्तो ड्रोन हो–जसले एक घण्टामा ४८० किलोमिटरको गतिमा उडान भर्न सक्छ। अहिलेसम्म वासिंटनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक यस्तो डिभाइस प्रयोगबाट सो क्षेत्रको एअर ट्राफिक नियन्त्रणमा पर्ने सम्भावित खतराबारे केही बताएको छैन। एजेन्सी/थाहाखबर